प्युठानमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई च्याउखेती तालिम सम्पन्न - Supadeuralionline::सुपादेउराली अनलाइन
प्युठानमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई च्याउखेती तालिम सम्पन्न
असार १३ सुपादेउराली अनलाइन प्युठान।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई दुई दिने व्यावसायिक च्याउ खेती तालिम खलंगा प्युठानमा सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग सेवा संघ प्युठानको आयोजना तथा मल्लरानी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा तालिम संचालन गरिएको हो। तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मल्लरानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता जि. सि. ले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई आयआर्जनमा जोडी आर्थिक रुपमा सबल बनाउन गाउँपालिका सधै प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सहभागीलाई सीप सिकेर व्यबहारमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भयो।
साथै उहाले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको हित र बिकासको लागि गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम तथा बजेटको ब्यबस्था गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको थियो।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यका साथ तालिमको आयोजना गरिएको संघका अध्यक्ष जुमान सिंह के. सि. ले बताउनु भयो।दुई दिन सम्म संचालन भएको तालिममा गाउँपालिकाका सबै वार्डबाट १४ जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा गाउँपालिका कृषि बिकास शाखा प्रमुख मोति आचार्य र सपना पोख्रेलले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक तरिकाबाट सहजीकरण गर्नु भएको थियो।